Hay’adda Qoxootiga Adduunka ee UNHCR oo shaacisay Tirada Qoxootiga dib ugu laabtay Somaliya | Saxil News Network
Hay’adda Qoxootiga Adduunka ee UNHCR oo shaacisay Tirada Qoxootiga dib ugu laabtay Somaliya
Kenya (Saxilnews.com)-Hay’adda Qoxootiga Adduunka ee UNHCR oo shaacisay Tirada Qoxootiga dib ugu laabtay Somaliya.
Hay’adda Qoxootiga QM ee UNHCR ayaa sheegtay in Qoxootigii Soomaaliyeed ee dib uga laabtay dalkooda Somalia ay tiradoodu dhan tahay 4,108 ruux laga soo billaabo bishii December ee Sanadkii hore2014-kii.
UHNCR ayaa warbixin ay soo saartay maanta ku sheegtay 250-qof oo ka mid ah qoxootiga Soomaaliyeed ay dib ugu laabteen Somalia, iyagoo Adeegsanaya Gaadiidka, halka 224-qof oo Qoxooti ahna laga Caawiyey inay Diyaarad ku gaaraan Muqdisho.
Tirada guud ee Qoxootiga ay hay’addu Gacanta ka siisay inay dalkooda dib ugu laabtaan in ay Dadkaasi si Mutadawacnimo ah u Gaaraan Somalia ay yihiin 4,108 qof. Sida lagu xusay warbixinta ay soo saartay Hay’adda UNHCR.
Sidoo kale, Hay’adda ayaa sheegtay in Qoxootiga kale oo tiradoodu tahay 4,878 oo ruux la xaqiijiyay inay doonayaan inay ku laabtaan Somalia; iyadoo sheegtay inay xooga Saarayso dib u celinta Qoxootiga doonaya inay waddankooda ay dib ugu laabtaan.
Hay’adda UNHCR waxay waxay sidoo kale xustay inay kala kaashanayso wakiilka u jooga Somalia Waxyaabaha ay Qabaan Qoxootigaas, Isla markaana ay daba-gal ku Sameynayaan kuwa imaanaya Soomaaliya.
UNHCR waxay xustay in Rajada laga qabo in Roob la helo Bilaha Oktoobar iyo November ee Sannadkaan darteed ay keentay in ay bataan Tirada Qoxootiga Soomaaliyeed ee dib ugu laabanaya Soomaaliyeed ee ku laabanaya Magaalada Muqdisho; Waxayna intaas ku dartay in la kordhinayo diyaaradaha aadaya Somalia.
Waxay kaloo Hay’addu Xustay in kordhinta Diyaaradaha ay ka Caawineyso Dadka Dib u laabanaya inay ku gaaraan meelihii ay horey uga yimaadeen si Nabadgelyo ah ka hor inta uusan billaaban xilli Roobaadka.
Sidoo kale, waxay xustay hay’addu inay weli jiraan xaalado amni-darro xilli ay Qoxootigu ay billaabeen in ay Dib u laabtaan Dalkooda, Waxay Hay’addu intaas ku dartay in weli ay jiraan Qoxooti badan oo ku Laabanaya Somalia iyagoo aan ka Helin Caawinaad Hay’adda UNHCR.
Hay’addu Waxay Xustay marka la Fiiriyo Heshiiska Seddex Geesoodka ah waa in la siiyo Taageero dadka dib u laabanaya oo doonaya inay gaaraan meelo ka mid ah Soomaaliya.
Ugu dambeyn, Xeryaha Qoxootiga ee Dhadhaab-Kenya ayaa Waxaa ku jira Qoxooti Fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo Qaarkood halkaas ku noolaa in ka badan 20-sanadood.